दिमाग सक्रिय राख्न दिनमा कति मिनेट, कसरी हिँड्ने ? – उज्यालो खबर
बुधबार, आषाढ ०९, २०७८ | June 23, 2021
दिमाग सक्रिय राख्न दिनमा कति मिनेट, कसरी हिँड्ने ?
मंगलबार, जेठ २५, २०७८ | ७:३८:५८ |
काठमाडौं। कोरोना महामारीले धेरैको सक्रियता घटेको छ। मान्छेहरू रोगको डर र सरकारी आदेशका कारण एकै ठाउँ बसेको बस्यै गर्न बाध्य छन्। यो शारीरिक निष्क्रियताले दीर्घकालीन समस्या ल्याउने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
महामारीबारे अध्ययन गरेका विज्ञले यसरी बसेको बस्यै गर्ने प्रवृत्ति र मृत्युको आपसी सम्बन्ध केलाएका थिए। लामो समय सक्रिय रहने मानिसको दाँजोमा सोफासेटमा बसेर समय काट्नेहरूको छिटो मृत्यु हुने अध्ययनले देखाएको छ।
दसौं हजार मान्छेमा गरिएको यो अध्ययनले शारीरिक सक्रियताको न्यूनतम विन्दु पहिल्याएको छ। त्यो हो- दिनको लगभग ३५ मिनेट फटाफट हिँड्ने।
हिँड्नु यति सजिलो व्यायाम हो, जसका लागि कुनै महँगो उपकरण चाहिँदैन। प्राकृतिक सुन्दरता भएको ठाउँमा हिँड्न पाए सुनमा सुगन्ध, नभए अहिलेजस्तो निषेधाज्ञा बेला आफ्नै घरको कौसीमा केही बेर फटाफट हिँडेर शरीर सक्रिय राख्न सकिन्छ।
स्नायू वैज्ञानिक शेन ओुमाराका अनुसार हिँडाइले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो बनाउँछ।
मानिसको दिमागबारे अनुसन्धान गर्ने ओुमारा आयरल्यान्डको डब्लिनस्थित ट्रिनिटी कलेजका प्राध्यापक हुन्। उनी हिँड्न मन पराउँछन्। हिँड्न पाउनु मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो भन्छन्। बेढंगी सहरी संरचनाहरूले हिँडाइको चाल नबिगारोस् भन्नेमा जोड दिन्छन्। आफू हिँड्ने बाटोमा जब बत्तीको रङ बदलिन्छ, जब कुनै संरचनाले छेक्न आइपुग्छ, उनी अर्कै बाटो समात्छन्।
बेलायती अखबार द गार्डियनु की संवाददाता एमी फ्लेमिङलाई हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, बाटो काट्न पनि अनुमति लिनुपर्ने कस्तो उदेकलाग्दो ! सरर हिँड्नु जीवनकै आनन्दपूर्ण अनुभूति हो। हामी त्यो अनुभूतिबाट वञ्चित हुँदै गइरहेका छौं।
५३ वर्षीय ओुमाराले हिँडाइकै विषयमा हालै एउटा किताब लेखेका छन्- इन प्रेज अफ वाकिङ। उक्त किताबमा उनले हिँड्दा हाम्रो दिमाग कसरी चल्छ भन्नेदेखि आफूले संगालेका यात्रा अनुभव र नियमित हिँड्ने मानिस स्वस्थ, खुसी र सिर्जनशील हुने तथ्यांक र विवरण प्रस्तुत गरेका छन्।
ओमाराको भनाइमा कुनै सहरबाट देखिने हिमाल वा फाँटको सुन्दरता नियाल्दै हिँड्नाले दिमाग शितल बनाउँछ। उनी दिनहुँ एउटै बाटो होइन, फरक-फरक बाटो हिँड्न सुझाव दिन्छन्। भन्छन्-जब हामी एउटै बाटो र एउटै दिशामा लामो समय हिँड्छौं, हाम्रो दिमाग त्यहाँको वातावरणसँग अभ्यस्त हुँदै जान्छ। त्यहाँका दृश्य हामीलाई नौला लाग्न छाड्छन्। हाम्रो मष्तिष्क नयाँ दृश्य देखेर तरंगित हुन बन्द गर्छ। यसले हाम्रो सिर्जनशीलता घट्छ।
सिर्जनशील हुन नयाँ-नयाँ बाटो हिँड्नुपर्छ, नयाँनयाँ दृश्यमा रमाउनुपर्छ, ओमारा भन्छन्।
सिर्जनात्मक काम मात्र होइन, जीवनका कतिपय योजना बुन्न पनि हिँडाइले मद्दत गर्छ। हाम्रो दिमाग धेरैजसो समय आजको समस्याले गिजोलिएको हुन्छ। यस्तोमा समस्याको समाधान र भोलि-पर्सिका योजना हामी सोच्नै भ्याउँदैनौं। त्यस्ता योजना हाम्रो मस्तिष्कभित्रै हुन्छ, तर सुषुप्त अवस्थामा। त्यसलाई सुषुप्त अवस्थाबाट मस्तिष्कको सतहमा ल्याउन दिमाग सक्रिय राख्नुपर्छ।
हिँडाइले दिमाग सक्रिय राख्ने हुँदा कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न र भविष्यका योजना बुन्न सहज बनाउने ओुमाराको भनाइ छ।
लेखक एवं विचारक बर्नाड रसल हिँड्नुलाई पनि आफ्नो कामको अभिन्न अंग मान्थे, ओुमारा भन्छन्, आइरिस गणितज्ञ विलियम रावन ह्यामिल्टन सात वर्षसम्म हरेक दिन एउटै समस्याबारे सोच्दै हिँडे। अन्ततः उनले क्वाटरनियन्स भन्ने नम्बर प्रणाली पत्ता लगाए। त्यो नभइदिएको भए विद्युतीय ब्रस वा मोबाइल फोनहरू आविष्कार हुने थिएनन्।
ओुमारा दिमागलाई मोटर सेन्ट्रिकु मान्छन्। जसरी मोटरलाई चलायमान नराखे काम गर्न छाड्छ, हाम्रो दिमागलाई पनि जति धेरै निष्क्रिय राख्यो त्यसको सोच्ने क्षमता घट्दै जान्छ। उनी यसलाई बुझाउन समुद्रमा पाइने हम्बल सी स्कर्टु नामक जीवको जीवनचक्रको उदाहरण दिन्छन्।
आफ्नो व्यस्क जीवनमा यो जीव चट्टान र ढुंगाको बाहिरी भागमा टाँसिएर बस्छ। मेरुदण्ड नभएको यो जीवसँग दिमाग पनि हुँदैन, किनभने यसले आफ्नो दिमाग आफैं खाइसकेको हुन्छ। तर, लार्भा अवस्थामा हुँदा यो जीवमा पनि अरूको जस्तै मेरुदण्ड, एउटा आँखा र सामान्य दिमाग हुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा पौडिने र आहार खोज्ने खुबी हुन्छ। आफू कहिले भोकाएको छु र कसरी यताउता गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। वयस्क हुँदै गएपछि जब यो जीव कुनै चट्टान वा ढुंगाको हिस्सा बन्छ, यसले आफ्नो अस्तित्वबाट नयाँ रूप लिन्छ। आफूसँग भएका आँखा, दिमाग र मेरुदण्ड आफैं खान्छ।
दिनभरि कुर्सीमा बस्नु भनेको पनि दिमागविहीन त्यही जीवजस्तै बन्नु हो, ओमारा भन्छन्।
ओुमाराले सन् २०१८ को एउटा अध्ययन पनि उद्धृत गरेका छन्। उक्त अध्ययनले २० वर्षसम्म मान्छेका गतिविधि र व्यक्तित्व पछ्याएको थियो। जो मान्छे कम चलायमान थिए, उनीहरूले खुलापन, समाजसँग घुलमिल हुने लगायत सामाजिक गुणमा कम नम्बर ल्याए। जो हिँड्ने खालका थिए, उनीहरूमा मानसिक समस्याको दर कम पाइयो।
सिर्जनात्मक काममा लाग्नुअघि कुनै शारीरिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा एकदम राम्रो हुन्छ। यसबारे हामीले परीक्षण गर्न आवश्यक छ,ु ओुमारा भन्छन्, हिँड्दा वा कुनै पनि समस्या समाधान गर्दा हाम्रो दिमागको सक्रियता धेरै बढेको हुन्छ।
हिँड्नु ओुमाराको रूचि मात्र होइन, उनको प्रयोगात्मक अध्ययनको हिस्सा पनि हो।
उनको अध्ययनअनुसार मान्छेको मष्तिष्कको एउटा भागमा तनाव र मानसिक चिन्ताको घर हुन्छ भने अर्को भागमा सिकाइ, स्मृति र अनुभूतिहरू खात लागेर बसेका हुन्छन्। तनाव र मानसिक चिन्ताको घर सक्रिय भयो भने हाम्रो दिमाग ध्वस्त हुन्छ। हामी विचलित हुन्छौं। त्यही बेला यदि हामीले दिमागमा खात लागेर बसेका सिकाइ, स्मृति र अनुभूतिको पाटो सक्रिय बनायौं भने, हाम्रा चिन्ता र तनावहरू स्वतस् कम हुँदै जान्छन्। यसका लागि हिँड्नु नै एक मात्र उपाय हो भन्ने ओुमाराको ठहर छ।
ुहाम्रो दिमाग भनेको अनेक तालहरूको मिश्रण हो। हामी तिनै तालसँग हिँड्छौं। हामी शारीरिक रूपले सक्रिय भए ती तालहरू पनि हामीसँगै सक्रिय हुन्छन्। हामी निष्क्रिय बसे ती तालहरू निष्क्रिय रहन्छन्। जब हामी हिँड्न थाल्छौं, ती तालहरू हामीसँगै चलायमान हुन्छन्। त्यसले हाम्रो जीवनमा लय लिएर आउँछ। त्यसैले, हिँड्नु सिकाइका लागि सबभन्दा उत्तम माध्यम हो। हिँड्दा हामीले वरिपरिको वातावरणबाट सूचनाहरू सजिलै संगाल्न सक्छौं, उनी भन्छन्।
केही मान्छे हिँड्नुलाई उचित व्यायाम मान्दैनन्। यो एकदमै ठूलो गल्ती हो भन्ने ओुमाराको भनाइ छ।
उनका अनुसार हामी दिनभर सक्रिय हुन आवश्यक छ। एक घन्टा जिम गएर मात्र हुँदैन। धेरै मान्छेको एक घन्टा एकदमै धेरै कसरत गर्ने र बाँकी समय निष्क्रिय बस्ने बानी हुन्छ। ओुमारालाई यो गलत लाग्छ। उनी व्यायामका विरोधी होइनन्, तर हिँड्नुलाई दैनिक जीवनसँग जोडिएको अभ्यास ठान्छन्।
हिँड्दा सहज जुत्ता र रेनकोट वा छाताबाहेक अरू केही बोक्नुपर्दैन। त्यसका लागि शरीर तन्काउने, तताउने लगायत कुनै तयारी गर्नुपर्दैन, उनले भने।
उनको सुझाव छ-हिँड्दा लामो लामो पाइला चाल्न उचित हुन्छ। सातामा कम्तीमा चारदेखि पाँचपटक दिनको ३० मिनेट, ५ किलोमिटर प्रतिघन्टाका दरमा हिँड्दा राम्रो हुन्छ।
तपाईं पनि हिँड्नुस् है ? हिँड्ने मान्छेले पाइला मेट्दैन, बरू जिन्दगीका नयाँ पाइलाहरू कोर्दै जान्छ। सेताेपाटीबाट
थप २६०७ जनामा कोरोना संक्रमण, ३९ जनाको मृत्यु
गण्डकी प्रदेश सभा बैठक आज, मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने
मध्यविन्दु नगरपालिकालाई अखिल क्रान्तिकारीले भन्याे : विधार्थीलाई राहत खै ?
मध्यविन्दु नगरपालिकाकाे नगर शिक्षा ऐनकाे २०७८ को विरोधमा ज्ञापन पत्र
नेपालमा थप ४,३४४ जनामा कोरोना संक्रमण, ८१ जनाको मृत्यु
बालुवाटारमा प्रधामन्त्रीले आफूनिकट नेतासँग छलफल गर्दै
एनटिसीका मोबाइल नम्बरमा फोन नलाग्ने समस्या
आजदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ, सुरूमा देउवाको मुद्दा
मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर, २० मन्त्री पदमुक्त
पार्टी र आन्दोलन एकतावद्ध बनाउन लागौं : माधव नेपाल
सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेले भन्यो : अदालतको फैसलाले राजनीतिलाई थप जटिल बनाउँछ
सुकुम्वासी वस्तीका ५३ घरपरिवारलाई खाद्यन्न सामग्री वितरण
कांग्रेस नवलपुरको सभापति हत्याउन तीनजनाकाे मुख्य प्रतिष्पर्धा
प्रचण्डद्धारा नारायणी नदीले डुबान र कटान गरेका क्षेत्रहरूको स्थलगत अनुगमन
गैँडाकोटमा बिहेकै दिन गरगहना लिएर बेहुली फरार
सामूदायिक विद्यालयहरुलाई गैँडाकोट नगरपालिकाको परिपत्र : समयमै पुस्तक उपलव्ध गराउनू
दक्षिण कोरियाका नेपालीले पठाए ८ वटा आइसियू बेड
कोरोनाको तेस्रो लहरसँग जुध्न सातै प्रदेशमा बालबालिका अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारकाे तयारी
केराको बुङ्गो खानुका यस्ता छन् फाइदा